Ikike nke iji Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe - OMG Solutions
N’oge nke ịlele anya, igwefoto ụdị di iche iche abụrụla anya nke atọ mmadụ niile na-ahụ ma na-edekọ. Otu n'ime ndị ikpeazụ ga-esonye bụ kamera ahụ, nke ahaziri maka iji ndị uwe ojii, ijide ma akparamagwa ndị uwe ojii na oge emere mpụ. Agbanyeghị, ojiji a na-abanye na mpaghara ndị ọrụ ọkachamara na ọbụna mpaghara agụmakwụkwọ. Ọgba aghara a na-emepe arụmụka ọhụrụ banyere oke ma ọ bụ na-amụ anya na mgbanwe nke omume metụtara.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ afọ nke ọma maka igwefoto, karịa mbipụta nke osisi selfie, na mmụba nke igwefoto arụmọrụ na GoPro dịka ọpụpụ kachasị ukwuu; ndị ụlọ na-ahụ ihe ndị uwe ojii na-eme; ngwa gụgharia n'efu na-agbasa ozi maka mmadụ niile; ma ọ bụ ngwaọrụ nchekwa dị elu nke njiri ihu. Igwefoto weghaara otutu oge na ndu anyi, yabụ ajuju ohuru banyere ihe ibi ndu nke anya ya nke oma.
Kpọsị, a nabatara igwefoto ahụ ma ọ bụ igwe ahụ nke ọma n'ọtụtụ obodo, ebe a na-ahụta ha dị ka njikwa na ngwa ọgụ dị egwu megide ike ndị uwe ojii. Ndị a bụ obere ngwaọrụ na-enweghị intrusive dị na uwe ndị ọrụ gị na ịdị elu ubu, iji dekọọ akọ n'echeghị na-egbochi ọrụ gị kwa ụbọchị. Ha nwere ike ịse ihe nkiri oge niile, na-enwe ike ibugo vidiyo na igwe ojii na-akpaghị aka.
Ọ bụ ezie na njikwa na ndị ọrụ uwe ojii na-atọkarị ụtọ na mpaghara siri ike, vidiyo na-aghọ enyemaka bara uru maka ndị mmanye iwu. O nwere eriri ke akwa, obi igwe oyuyogoro nke dowe-talkie ga-enye ndi uwe ojii na ndi gendarvi aka ka ha gosi ihe ha n’eme. Ogo 360 na-agbanwe agbanwe, oghere ogologo ha nwere ike weghara ọnọdụ ọ bụla, n'ehihie ma ọ bụ n'abalị, na mbido ndị uwe ojii na-arụ ngwaọrụ ahụ dabere n'ọnọdụ ahụ. Na-emechi usoro nke ndị ọrụ anyị, igwefoto ndị a na-enyezi ụzọ iji gosipụta okwu nlelị ma jide n'aka na ndị iguzosi ike n'ihe nke ndị ọrụ anyị n'oge ndenye akwụkwọ na nkwụsị. A na-eji foto na ụda ahụ edere na kaadi ebe nchekwa na-ejide ndị uwe ojii na CD-Roms. Ndị a bụcha akaebe nke enwere ike itinye aka na nkeji ole na ole ịkọwapụta ihe ndị bụ eziokwu na nke ahụ nwere ike iji usoro dị a feedaa nye usoro.
Ngwaọrụ a tinyekwara sọftụwia pụrụ iche na-echekwa ma na-edetu ndekọ ma na-egbochi ụdị mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla. Ma bụrụ nke izu ohi ma ọ bụ mfu, a na-enye ya usoro eji akpọchi. Ha na-ekwe ka ndekọ na -acha ncha dị ala na ọnọdụ dị oke egwu.
Ebumnuche ahụ doro anya n'ihi na ọ na-enye ohere ijide omume nke onye nnọchi anya ya - nke kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na o zighi - na mgbe emere mpụ. Otú ọ dị, ụdị ngwaọrụ a abụghị naanị ihe bara uru maka ndị uwe ojii. Dịka ọmụmaatụ, na Asia, atụlela ojiji o maka ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ, ndị nche, ndị nchekwa mmiri, njikwa anụmanụ ma ọ bụ ọbụlagodi n'ọzụzụ, na-akwadebe ndị isi na ndị osote ndị isi na igwefoto ahụ n'afọ na-esote iji debanye mmekọrịta ha na ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ.
Ngwaọrụ a na-enye ohere usoro ndekọ mgbe-oge. Anapụta ya ozugbo, ngwaọrụ ahụ malitere idekọ ma ọ bụ onye ọrụ gọọmentị enweghị ike ịchịkwa ya n'ihi na ebudata ozi ahụ naanị oge ngbanwe ga-akwụsị, n'otu n'ime ngalaba nnakọta, ebe ọ bịarutere ọ dị mkpa ijikọ ha ma pịnye onye ọrụ. na nke ahụ, ha nwere ike ibudata faịlị na isi etiti yana ma halee ihe ha mere n'oge ụfọdụ, mana ha enweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ hichapụ ya.
N'otu aka ahụ, ngwaọrụ ahụ na-edekọ vidiyo HD zuru oke (na ezigbo oge), ọdịyo na ala, nke pụtara na ebe dị iche iche na-achịkwa ha ga-enwe ike ịmata ozi izugbe banyere onye na-ebu ya. Uru ọzọ bụ iji vidiyo dị ka ihe akaebe n'ụlọ ikpe.
Ihe ndị ọzọ eji arụ ọrụ nke ngwaọrụ a, bụ ihe a na-ejikarị, bụ ọrụ dị egwu na oke ụjọ, ebe a na-emepụta ya iji guzogide ọnọdụ ọjọọ nke anwụ na mmiri na-enweghị ọdịda.
Enwere ike iji kamera ahụ dị ka ihe nchebe. Mgbe mmadụ na-eme ihe ike ma gwa ya na a na-edekọ ya ma ọ bụ hụ igwefoto ahụ, ọ na-agbanwe mgbanwe n'ime omume, Ọ bụ nchekwa nchekwa ọzọ. Ọzọkwa, ọmụmụ na-egosi na ụmụ amaala na-akpa àgwà ka mma mgbe edere ha.
Ndị uweojii na-echekwa vidiyo igwefoto ndị ahụ ma debe ya na sava echekwara. Costzụtara ego izizi nke akụrụngwa bụ ụgwọ ogologo oge ịchekwa data mmemme.
Nke kachasị, data igwefoto gosipụtara mbelata mkpesa ndị ọrụ, yana mbelata nke ukwuu site n'aka ndị ọrụ ndị uwe ojii. Offọdụ uru nke kamera ahụ gosipụtara na mba ahụ na anyị na-ahụ ugbu a na ule anyị bụ mmụba nke nghọta. A na-ese vidiyo ọ bụla ma ọ bụrụ na ọkwa ndị ọha na ndị uwe ojii mara ya, onye ọ bụla na-akpa àgwà ka mma.
Edere vidio ahụ site n'echiche onye ọrụ ahụ wee were ogo 130. Dika ndi ozo di iche iche na egosiputa na ebe i nwere uzo di iche.
Nchọpụta ndị ahụ na-egosi na ụwa nwere igwefoto ndị ọzọ nwere onyunyo nwere ike ịbụ, n'otu ụzọ, ịdị mma karịa na nchekwa. Mana ka onyinye nke teknụzụ na-eto, enwerekwa ohere ndị ọzọ maka iji ọtụtụ ihe. N'ime nke a ka a na-agbakwunye amuma nke iwu. Nke a emeela, imaatụ, arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ gbasara etu ndị uwe ojii kwesịrị isi jiri igwefoto mee ihe ma ọ bụrụ na enwere ike iji ha ebe ọ bụla, ma ọ bụ oge ihichapụ ihe ndekọ.
Dị ka teknụzụ ndị a na-apụta, ọ nweghị iwu siri ike maka ojiji ha, yabụ enwere ike ịpụta anyị ihe ndekọ na-aga n'ihu ebe ọ bụla anyị na-aga, na-enweghị ịchịkwa onye nwere ike ịhụ foto ndị ahụ. Agbanyeghị, ọnọdụ a nwere ike ịnwe mmetụta na-atụghị anya ya na ịmepụta ọha na-anabata ndị ọzọ. Ma na anyị na-ekele ọrụ nke ndị ọzọ.
Nzuzo 6754 1 Echiche Taa